Biyyi keenya dimokiraasif haaraa miti- Abbaa Gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa – Fana Broadcasting Corporate
Biyyi keenya dimokiraasif haaraa miti- Abbaa Gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa
Finfinnee, Fulbaana 25,2011(FBC)-Ityoophiyaan jaarraa dheeraa dura addunyaaf sirna dimokiraasii arjoomuu ishee Abbaan Gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa ibsaniiru.
Bu’uurri sirna dimokiraasii addunyaa Gadaadha kan jedhan Abbaan Gadaa,biyyootni baay’en sirnicha haalan fudhachuun sirna dimokiraasii yoogguu dagaagsan biyyi teenya garuu, waan isheetti haalan fayyadamuu dhaabuun dimokiraasii irraa osoo hin fayyadamiin haftee jirti jedhaniiru.
Sirni Gadaa cee’umsa aangoo barsiisa waan ta’eef, dhaabni biyya bulchaa jiru ADWUI’n sirna kana dagaagsuf xiyyeeffannoon hojjechuu akka qabu Abbaa Gadaa Goobanaa hubachiisaniiru.
Lammiilen Ityoophiyaa waggoottan darban dimokiraasii kan dheebotan yoo ta’u, bilisummaa sirni dimokiraasii yeroo ammaa isaan gonfachiise kana kunuunfachuun haalan itti fayyadamuu akka qaban dhaamaniiru.
Keessattuu waggoota dhiyoo keessatti lammiilen biyyattii gaaga’ama siyaasaf kan saaxilamanii turan ta’uu kan ibsan Abbaan Gadaa Goobanaa,ammatti abdiin waan mul’ateef abdiin mul’ate firii akka horatuuf yaa’ii ADWUI gaggeeffamaa jiru irraa murtee cimaatu eeggama jedhaniiru.
Oromoon aadaa fi duudhaa ganamaatin biyya ijaaree dhaloota dhaalchisuun kaayyoo…
Guutuu Oromiyaatti Tajaajila lammummaa hirmaannaa dubartootaa milkeessuf hojjetamaa…